........HIGH WAY UP !: ကိုရီးယားရဲ့ဟန်နှင့် မြန်မာတို့၏မာန်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတလျှောက် တသွင်သွင်စီးဆင်းလျက်ရှိတဲ့မြစ်ပြင်ကျယ်ကြီးကို ဟန်မြစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဟန်မြစ်ဆိုတာ တကယ်တမ်းတော့ ကိုရီးယားမြစ်လို့ မြန်မာလိုခေါ်လို့ရပါတယ်။ ကိုရီးယားတွင် ဟန်ဂူလ်း၊ ဟန်ဂျာ၊ ဟန်ဂုဂ်..စသဖြင့် ဟန်ဟာကိုရီးယားကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ စာလုံးတစ်လုံးအဖြစ် ကိုရီးယားစာတွေထဲမှာ အလွယ်တကူတွေ့နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဟန်မြစ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ဧရာဝတီမြစ်နဲ့ တူတဲ့အချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဟန်မြစ်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာကတော့ တောင်ကိုရီးယားဘက်မှာရှိတဲ့ တောင်ဟန်မြစ်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားဘက်မှာရှိတဲ့ မြောက်ဟန်မြစ်တဲ့ပေါင်းဆုံရာကနေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
ယခင်ကိုရီးယားတစ်နိုင်ငံတည်းအဖြစ် ရှိစဉ်တုန်းကတော့ ကိုရီးယားတောင်ပိုင်းမြစ်လက်တက်နဲ့ မြောက်ပိုင်းမြစ်လက်တက်တို့ ပေါင်းဆုံရာက စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ ဆိုကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ခုတော့ မြောက်ဘက်ကမြစ်က မြောက်ကိုရီးယားဘက်ခြမ်းမှာရှိပြီး တောင်ဘက်ကမြစ်ကတော့ တောင်ကိုရီးယားဘက်မှာ တည်ရှိနေတဲ့အတွက် ဒီဘက်ကငါ့ဟာ၊ အဲ့ဒီဘက်ကမင်းဟာ ဆိုတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတော့တယ်။
ဒါလေးကို မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ချိန်ထိုးလို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ယခုလိုအချိန်မှာသာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် မလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင် နောင်တစ်ချိန်မှာ မေခနဲ့မလိခ မြစ်နှစ်သွယ်ဟာလည်း တစ်ဘက်ကရိုဟင်ဂျာပိုင်တာ၊ တစ်ဘက်ကတရုတ်ကပိုင်တဲ့အခြမ်းထဲမှာ ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာ၊ယဉ်ကျေးမှုတွေ မပျောက်ပျက်ဖို့ဆိုတာ နိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းမှာ တာဝန်အပြည့်ရှိပါတယ်။ သူများအော်တိုင်း လိုက်မယောင်ကြဖို့ဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကနေ နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့ ကိုရီးယားတွေဟာ မြန်မာတွေကို မြင်ရင်အလွန် အံ့သြကြပါတယ်။ သူတို့လူမျိုးတွေအားလုံးဟာ မျက်စိပေါက်ကျဉ်းကျဉ်း၊ အသားအရည်ဝင်းဝင်း တစ်မျိုးတည်းရှိပေမယ့် မြန်မာလူမျိုးကတော့ ၁၃၅ မျိုးခန့်ရှိတဲ့ မျက်နှာပေါက်စုံလင်သော လူမျိုးပေါင်းစုံရှိနေတာပါ။ တစ်ခါက ပါမောက္ခတွေနဲ့ ဒင်နာစားရင် ဆရာတစ်ယောက်က စိတ်ဝင်တစားမေးလာပါတယ် မင်းတို့နိုင်ငံကလူတွေက တရုတ်နဲ့လည်းတူတယ် ကုလားနဲ့လည်း တူတယ်နော်တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်လို့ မယုံတော့မရှိပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့က လူမျိုးပေါင်း ၁၃၅ မျိုးတောင်ရှိတယ်လို့ဆိုတော့ တော်တော်အံ့သြသွားပါတော့တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ဧရာဝတီဟာ ရာဇ၀င်သမိုင်းအဆက်ဆက်မှာ စစ်ချီစစ်တက်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေအတွက် အကျိုးပြုခဲ့သလို ဟန်မြစ်ဟာလည်း ကိုရီးယားရဲ့ သမိုင်းကြောင်းမှာ အရေးပါခဲ့ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားက တောင်ကိုရီးယားကို ကျူးကျော်မှုစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ဟန်မြစ်တစ်လျှောက်ကနေ ဆိုးလ်မြို့နားကိုချဉ်းကပ်လာတဲ့အခါမှာ တောင်ကိုရီးယားဘက်ကနေ ဆည်တစ်ခုကိုဖောက်ခွဲလို့ ဟန့်တားခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဂျာမနီကရေကာတာကြီးများကိုလည်း မဟာမိတ်တို့က လေယာဉ်တွေနဲ့ဗုံးကြဲဖောက်ခွဲကြပါတယ်။
ဆည်ကျိုးတာနဲ့ လူနေအိမ်ခြေမြောက်များစွာ သေကြေပျက်စီးပြီး မြေဧကများစွာရေလွှမ်းမိုးသွားမှာမို့ ဂျာမနီကဆည်ကာတာတွေကို လေယာဉ်ပေါင်းများစွာနဲ့ ရေကာတာခွင်းနိုင်မယ့် ဗုံး (ထူလွန်းတဲ့အတွက် သာမာန်မပေါက်လို့ ရေထဲကိုပစ်ချပြီး ရေအောက်ရောက်မှ အရှိန်ပြင်းပြင်းပေါက်ကွဲစေကာ Shock Wave လို့ခေါ်တဲ့ ကြီးမားတဲ့လှိုင်းဂယက်ကြီးဖြစ်ပေါ်စေကာ ထိုအားဖြင့်နံရံကိုတွန်းလှဲတဲ့ဗုံး) ကို တကူးတကတီထွင်ကာ လေယာဉ်ပစ်အမြောက်များချထားတဲ့နေရာကို အသေခံဝင်လို့ ဗုံးကြဲကြပါတယ်။ (ဂျာမနီကလည်း ဗုံးကြဲနိုင်တယ်ဆိုတာ တွက်မိပြီးသားမို့ အရေးကြီးတဲ့ဆည်တွေမှာ အစောင့်တွေချထားပြီးသားပါ။)
ဒီလိုအချက်တွေသမိုင်းမှာရှိခဲ့တာကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံမှာ ဧရာမဆည်ကြီးဆောက်ပြီး သူတစ်ပါးတိုင်းပြည်လက်ထဲကို နှင်းအပ်ထားမယ်လို့စဉ်းစားတာဟာ ပညာမဲ့လွန်းလှပါတယ်။ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံဟာ ခုမိတ်ဆွေဖြစ်ပေမယ့် နောင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့ ကိုရီးယားတောင် နှစ်နိုင်ငံကွဲနေသေးတာကိုကြည့်ရင်
လူမျိုးပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စည်းလုံးရေးဟာ ဘယ်လောက်ခက်မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းကြည့်ပါ။ ဂျပန်ကိုတိုက်ထုတ်အပြီးမှာ ရုတ်တရက်မြောက်ပိုင်းကို ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ ဆိုဗီယက်ရုရှားရဲ့ လုပ်ရက်အကျိုးဆက်ကို ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ ခံစားနေရဆဲဖြစ်သလို ဗြိတိသျှတို့စနက်နဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကို သတ်ဖြတ်လုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့ အကျိုးဆက်ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံဟာယခုအချိန်ထိ ပြည်တွင်းစစ်တစ်ခုအဖြစ် ရင်ဆိုင်နေရဆဲပါ။
မြစ်တစ်မြစ်ဆိုတာ မနေ့တစ်နေ့က ထဖြစ်ချင်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ မြစ်တစ်မြစ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ အချိန်ယူရသလို ထိုမြစ်တစ်စင်း ဆက်လက်စီးဆင်းနေဖို့ဆိုတာလည်း ခေတ်အဆက်ဆက်ကမျိုးဆက်တွေ တာဝန်ကျေမှသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရှေ့ကလူတွေ တာဝန်ကျေခဲ့လို့ ဧရာဝတီမြစ်တစ်စင်း ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိနေတာကို ကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှ ထိုးချေခံလိုက်ရမယ်ဆိုတာ သမိုင်းမှာရှက်စရာကောင်းလှပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကဧရာဝတီနဲ့ ဖြစ်ပေါ်ပုံချင်း၊ ရာဇ၀င်အသွားအလာချင်း ခပ်ဆင်ဆင်တူပေမယ့် သူတို့ပေါ်မှာအလေးပေး ဆက်ဆံခံရပုံချင်းမှာတော့ ဟန်နဲ့ဧရာဝတီဟာ မိုးနဲ့မြေလို ကွာခြားပါတော့တယ်။ ရာဇ၀င်သမိုင်းမှာ မာန်ဟုန်ပြင်းလှတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ရိုးတလျှောက်ဟာ ညစ်ကြေးစုတ်ပျက်လို့ စွန့်ပစ်ခြင်းခံရတဲ့ အပယ်ခံတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေပေမဲ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ဟန်ကတော့ မြစ်ရိုးတလျှောက်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် တိုင်းသူပြည်သားတို့နားခိုရာ အပန်းဖြေထိုင်ခုံ၊ မြစ်ကမ်းနဘေးများ သပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ မြစ်ရိုးတလျှောက်လုံး စက်ဘီးစီးသွားမလား၊ အိမ်သာခပ်လှမ်းလှမ်းတိုင်းချထားပေးလို့ မြစ်ရိုးတလျှောက်လုံး လူတွေတရုံးရုံးဖြစ်လို့နေပါတယ်။
လူတွေဟာ ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပေမယ့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို တန်ဖိုးမထားတတ်ကြပါဘူး။ မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသာ တန်ဖိုးမထားချင်မထားလို့ရပေမယ့် သဘာဝကပေးအပ်ထားတာကို တန်ဖိုးထားကိုထားရပါမယ်။ ဒီလိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့စိတ်ဟာ လူတွေကို တိရစ္ဆာန်တွေထက် သာစေတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအတွက် အတ္တမာန်မာနတွေ အစဉ်အမြဲပြင်းထန်နေကြသလို အမျိုးဂုဏ်ဇာတိဂုဏ် မြင့်မားဖို့နဲ့ ဇာတိသွေးဇာတိမာန်ပြဖို့အတွက် မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရာဇ၀င်ထဲကသတို့သမီးကိုတော့ ဟန်လောက်မချစ်ကြရင်နေပါ မာန်လေးနဲနဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပြင်ဆင်ပေးကြစေချင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာမှာ လူမျိုးပေါင်း ၁၃၉ မျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုဟာမျိုးကို လူမျိုးလို့ခေါ်မလဲဆိုတာကလည်း စည်းမျဉ်းအတိအကျလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေသေးတယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေ သေချာသတ်မှတ်ပြီးမှ ပြန်လည်သုတေသန လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာတွေရဲ့မာန် - တစ်ခါကတော့ ကိုရီးယား SK Telecom က အရာရှိတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ သူကခုလိုပြောလာပါတယ် ခင်ဗျားတို့ မြန်မာတွေက ဆင်းသာဆင်းရဲတာနော် မာနတော့အကြီးသားပဲ။ တစ်ချိန်ကအာရှမှာ အရမ်းချမ်းသာခဲ့ကြလို့ ထင်တယ် လို့ပြောပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ကိုရီးယားလူမျိုးတွေဟာ လိုချင်ရင် ရဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေပါ။ ပေးဆပ်မှုက အရေးမကြီးပါဘူး။ (ကိုယ့်လူမျိုးထဲလည်း ဒီလိုလူတွေ ရှိတော့ရှိတာပါပဲ)။ ဒီလိုတွေကြောင့် ပေးဆပ်မှုတွေများပြီး ထိပ်ဆုံးရောက်အောင်လုပ်၊ ပြီးမှငယ်ကျိုးငယ်နာတွေပေါ်လို့ နာမည်ကြီးသမ္မတတွေကအစ၊ မင်းသားမင်းသမီး အဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင် ကြတော့တာပါပဲ။
Lion August 9, 2012 at 9:43 PM
ခေါင်းစဉ်မြင်တာနဲ့ ဖတ်ကြည့်ချင်စိတ်ပေါ်မိတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ ...
ကိုရီးယားနဲ့မြန်မာတို့၏ မြစ်နှစ်ခုအကြောင်းကိုဦးတည်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ရေးသား ထားသော်လည်း အဓိကအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသော ပြသနာအချို့ကို ခပ်ပါးပါး တို့ထိဝေဖန်အကြံပြုထားပါသည် ... ဆောင်းပါးပါ အကြောင်းအရာအားလုံးကောင်းပါသည်ဟု ပြောလျှင်တော့ ဆောင်းပါးရှင်ကို မြှောက်ပင့်ထားသော Comment ဖြစ်သွားမည်ကို မလိုလားပါ ...
မိမိတစ်ဦးတည်းအမြင်ကိုပြောရလျှင်တော့ စတုတ္ထ စာပိုဒ် အောက်ဆုံးအကြောင်းကို မရေးသင့်ပါဟုမြင်ပါသည် ... စာရေးသူမှ ဟာသအနေဖြင့်ရေးသော်လည်း အစားကောင်းတစ်ခုကို အားရပါးရစားနေစဉ် ခဲဝါးမိသလိုခံစားရပါသည်...အကြောင်းအရာကောင်းသောဆောင်းပါးတွင် ပေါ့တန်သော အရွှန်းဖောက် မှုမျိုးမပြုလုပ်သင့်ဟု ထင်မိပါသည် ... အဆိုပါစာသားကို ပြည်တွင်ဂျာနယ်များတွင်လည်း ထည့်သွင်းခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ဟုမြင်မိပါသည်...ဆရာမောင်မျိုး(စက်မှု)ယခုလိုကောင်းမွန်သော ဆောင်းပါးများ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေဟု မျှော်လင့်လျှက် ...
၀ိဝိ August 11, 2012 at 11:35 AM
လောက်ကတော့ရှိဖို့ တော့ လိုနေပါပြီ
Aung Myo Thu August 13, 2012 at 1:47 AM
အွန်လိုင်းမှာ သူများကိုပယ်ပယ်နယ်နယ် အပုပ်ချရေးသားတာတွေကိုသာ အသည်းအသန်အားပေးနေကြတဲ့အချိန်မှာ ယခုလိုပို့စ်မျိုးကို လာရောက်ပြီး သေသေချာချာ ဖတ်ကြတဲ့အတွက် ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။
july August 17, 2012 at 9:20 PM
This post make me pleasure and knowledgeable.Good post!!! Let me share. :)
Aung Myo Thu August 17, 2012 at 10:14 PM
nweni tun August 17, 2012 at 10:01 PM
Aung Myo Thu August 17, 2012 at 10:16 PM
ခုလိုစာဖတ်တဲ့သူမှာ တစ်စုံတစ်ခုရရှိတယ်ဆိုတာသိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်